Kaomina Ranopiso, distrikan’i Tolagnaro : vehivavy mionjo – METFP
👏🏼 « Mankahery antsika vehivavy mionjo ny tenako, ary mandrisika hatrany hanana fahazotoana hiofana sy hianatra asa, satria isika no fototry ny aina, loharanon’ny fivoarana sy fampandrosoana. Ny fahaizana asa velon-tena dia ampinga hoentintsika mampivoatra ny fiainantsika sy ny tokantranontsika » hoy Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa.
🎓 Vehivavy maherin’ny 1.500, ao anatin’ny kaominina miisa 9 ( Ranopiso, Ranomafana, Bevoay, Emagnobo, Enakara, Enaniliha, Sarisambo, Fenoevo Efita, Ankariera, Andranobory, Ankilivalo) no nisitraka fanofanana asa fototra sy asa velon-tena, toy ny fanaovana paty gasy sy mofo mamy.
⬆️ Tsy nataonay ho sakana ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra, fa dia nohezahiny ny nitadidy izany tamin’ny fanaovana tsianjery ireo lesona nampitaina raha ny fanazavan’ny solontenan’izy ireo, rehefa nitondra teny fankasitrahana ny fitondram-panjakana.
Azo lazaina fa dingana lehibe izao asa fanofanana ny vehivavy izao satria « Mipàka eny ifotony ny fanofanana arak’Asa mba hi tena ho vehivavy mionjo tokoa » araka ny namafisin-dRamatoa Aida, Solombavam-bahoakan’i Tolagnaro, reny mpiahy ireto andiany ireto.